Monday May 09, 2022 - 20:25:05 in by Super Admin
Saddexda Ay Ku Fiicnayd:
1. Madaxwynuhu si fiican ayuu uga hadla suuqa Waaheen dabkii ka dhacay sida loo wajahay iyo waxa uga qorshaysan. Waxa uu awoodda saaray in cashar laga barto oo guryo ammaan ah la dhisto.
2. Waddadda Ceergaabo Oo DHAMMAAD ku dhow waa waxqabad wayn oo xukuumaddihii KULMIYE ee Axmed Siilaanyo Iyo Muuse Biixi guul ka gaadheen. Waxa hadhsan wax ka yar 10 KM iyo waxooga buundooyin ah.
3. Sida uu Mucaaridka iskaga celiyay. Boolo xoofto iyo hanjabaaddu haddii ay kaa noqoto ta daayeerka waa lagu fahmayaa. "Boolo xoofto daayeer ama been noqotay ama beelo rogtay,” ayaan maqli jiray. Madaxwaynuhu waxa uu yidhi hanjabadda iska daaya. Waa runtii.
Saddexda Ay Ku Liidatay:
1. Canaantii xukuumaddiisu lahayd oo uu Madaxwaynuhu dadka saaray. Waxqabadka dalka waxa loo doortay Xukuumadda ee ninka geela la jooga ama haweenayda tukaanka haysata shaqadeeda maaha. Shacabka cashuur baa lagu leeyahay ee biyo gellinta Hargeysa doorkoodii maaha. Matalan, waabaan jeclaa in Hargeysi biyo hesho ee halkee ka bilabaa? Ma Maareeyihii biyaha ayaan ahay?
2. Mushxarad iyo sacab ay golaha ku dawikhiyeen dad aan ahayn mudanayaashii golaha. Waa ceeb ciddii samaysay dul hoganaysa. Goluhu karaamo Dastuuri ah ayuu leeyahay oo ay tahay inaan laga qaadin. Annigu bahdilaad ayaan u arkayay.
3. Nolosha qaalliga ah ee dadku sida ay u kala danyar san yihiin u taabatay, Madaxwaynuhu sideedii uma taaban oo kama garaabin mana sheegin qorshe dawladeed oo uu ku wajahayo. Waa arinka ugu hadal haynta badan ee maanta dalka ka jirta. Taasi waxa ay i gelisay tuhun ah in Madaxwaynuhu aanu si fiican u ogayn waxa dalka ka socda oo malaha aan xogta saxda ah la siin.
Faaladayda qudbadda madaxwyanuhu intaas ayay ku eeg Tahay".